Myat Shu - 2011 July
You are here : Myat Shu » Archives for July 2011
နှမ်းဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းနေပြီး ပြည်ပမှ အ၀ယ်ပါးလျက်ရှိ
Published By Myat Shu On Sunday, July 31st 2011. Under သတင်းတိုများ
ပြည်ပတင်ပို့နေသော နှမ်းဈေးကွက်တွင် နှမ်းဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းနေသောကြောင့် ပြည်တွင်း နှမ်းဈေးကွက်တွင်လည်း ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းနေပြီး အ၀ယ်ပါးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ “နှမ်းဈေးက ပြည်ပတင်ပို့နေတာရော ပြည်တွင်း ဈေးကွက်မှာပါ ဈေးကျနေတယ်။ တရုတ် အ၀ယ်ကလည်း အေးနေလို့ပါ။ ဈေးကတော့ အခု ကျနေသေးတယ်” ဟု မကွေးမြို့မှ နှမ်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ပြောသည်။ နှမ်းဈေးနှုန်းများမှာ ဇူလိုင်လ ပထမပတ်နှင့် ဒုတိယပတ်တွင် နှမ်းဖြူတစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၅၉၀၀ ဈေး ရှိခဲ့ရာ ဇူလိုင် တတိယပတ်အတွင်း နှမ်းဖြူတစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၅၃၀၀ သို့ ကျဆင်းခဲ့ပြီး တစ်အိတ်လျှင် ကျပ် ၆၀၀ ၀န်းကျင် ကျဆင်းသွားကြောင်း သိရသည်။ “ပြည်ပတင်ပို့နေတဲ့ ဈေးကွက်မှာလည်း တစ်တန်ကို ကျပ်တစ်သောင်း ... Continue Reading
ကိုယ်အင်္ဂါ (ခန္ဓာကိုယ်) အစိတ်အပိုင်း အလှူခံသူများ မန္တလေးတွင် ပေါလာ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ခန္ဓာကိုယ် အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများ ပုံမှန် အလုပ်လုပ်ပြီး ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်တာကြောင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အစားထိုး ကုသရန် လိုသူများက အဆိုပါ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအတွက် အလှူခံမှုများ မန္တလေးတွင် ပေါများလာကြောင်း သိရသည်။ မန္တလေးမြို့ မြောက်ပြင် ဓမ္မပါလ သွေးလှူရှင် အသင်းဝင်တစ်ဦးထံ အသည်းအစားထိုး ကုသရန် လိုအပ်တဲ့ ဝေဒနာရှင်ရဲ့ ဇနီးက ဆက်သွယ် အလှူခံလာကြောင်း၊ အဆိုပါ သွေးအလှူရှင် အသင်းဝင်ကလည်း လှူဒါန်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက် ဝေဒနာရှင်နဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ ဆေးစစ်ဆေး စမ်းသပ်ချက်များ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ “ပြီးခဲ့တဲ့ရက် နှစ်ပတ်လောက်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ကျွန်တော်တို့ သွေးလှူရှင် အသင်းကို ဆက်သွယ်လာတယ်။ AB ... Continue Reading
မန္တလေးမှာ Online Smart Card ဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်နိုင်
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်များတွင် အချိန်တိုအတွင်း ငွေထုတ်ငွေသွင်း ပြုလုပ်နိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှု (Quick Cash Online) ကို Online Smart Card ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်နိုင်ရန် Online Account စာရင်းကို မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်များတွင် အနည်းဆုံး ငွေသား ကျပ်တစ်သိန်းဖြင့် ဖွင့်လှစ်ရမှာ ဖြစ်သည်။ စာရင်းဖွင့်ပြီးနောက် စာရင်းရှင်နှင့် ငွေစုဘဏ်စာရင်းတို့မှ Online Account သို့ စာရင်းပြောင်း ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း စာရင်းဖွင့်ပြီး တစ်ပတ်အကြာ ဘဏ်ခွဲမှ Customer များအား Online Smart Card တစ်ခုနှင့် အွန်လိုင်း ငွေမှတ်စာအုပ် (Online Passbook) တစ်အုပ် ... Continue Reading
ဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း မဲစနစ်ဖြင့် ဥက္ကဌ ရွေးမည်၊ သတင်းမှားယွင်း ဖော်ပြပါက တရားစွဲမည်ဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံ ဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း (MTGA) အနေဖြင့် ဥက္ကဌနှင့် အထူးတာဝန်ရှိသူများအား မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် တင်မြှောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဝင် ကိုထွန်းမြတ် (ဆူးသစ်နီ)က ပြောသည်။ အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပုဂံ၊ မန္တလေး၊ တောင်ကြီး ဇုံနယ် သုံးခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖိတ်ခေါ်၍ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “MTGA ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ မဲပေးမယ့် စနစ်တွေကို ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာနကို တင်ထားပါတယ်။ ဟိုတယ်ခရီးက အတည်ပြုချက်ရရင် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်သွားမှာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်မယ့် သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့က ... Continue Reading
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် ပင်လယ်ပြင် လေ့ကျင့်ရေး အခြေစိုက် ရွက်လှေစခန်း ဖွင့်မည်
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် ပင်လယ်ပြင် လေ့ကျင့်ရေး အခြေစိုက် ရွက်လှေစခန်းကို ငွေဆောင်တွင် ဆောက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၂၇ ကြိမ်မြောက် ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ ရွက်လှေပြိုင်ပွဲအတွက် ငွေဆောင်တွင် ကျင်းပနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာမှ ခွင့်ပြုချက် ရပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခု မြေကွက်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ မြေကွက်ရရှိ ပြီးစီးပါက နှစ်နှစ်စီမံကိန်းဖြင့် အပြီး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ “ရွက်လှေပြိုင်ပွဲကို အစက နေပြည်တော်က ဆည်တွေမှာ လုပ်ဖို့ပါ။ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတာနဲ့ ငွေဆောင်မှာပဲ လုပ်ဖြစ်မှာပါ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရွက်လှေအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ရွက်လှေလေ့ကျင့်မှုများကို အင်းလျားကန်တွင်သာ အများဆုံး လေ့ကျင့်လျက်ရှိရာ ... Continue Reading
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ပါတီတွင် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး သဘောထား ကွဲလွဲမှုများ ရှိနေ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းနှင့် ပါတီ မူဝါဒရေးရာ ကော်မတီ၏ ဦးဆောင်သူ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား ကွဲလွဲမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ ပါတီအနေဖြင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရန်ကိစ္စတွင် မူဝါဒရေးရာ ကော်မတီ၏ ဦးဆောင်သူဖြစ်သည့် ဦးခင်မောင်ဆွေနှင့် သဘောထား ကွဲလွဲမှုပေါ် ပါတီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အကျိုးစီးပွား၊ တိုင်းပြည် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲပေးရန် အစီအစဉ် မရှိကြောင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းက ပြောဆိုသည်။ “ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့မှာက အစကတည်းက ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှ ၀င်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်လာတာပါ။ သို့သော် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, July 29th 2011. Under နှလုံးသားစာမျက်နှာ
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရှိလှသည့် သူမ၏ လက်ချောင်းများက ကျွန်တော့ဆံပင်တချို့ကို ထိုးဖွရင်း ခပ်အုပ်အုပ် ရယ်မောနေပါသည်။ ခပ်ပြေပြေ လွင့်ပျံ့လာသည့် ရနံ့တစ်ခုကြောင့် ကျွန်တော့်ရင်တွေ နူးညံ့စွာ လှုပ်ခတ်သွားသည်။ ကျွန်တော် အမြဲသိချင်ခဲ့ပြီး သူမ ဘယ်တော့မှ မပြောပြခဲ့သည့် ရေမွှေးနံ့ဟုပြောလျှင်လည်း ရမည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် သူမဆီမှ ထိုရနံ့ကို မြတ်နိုးစွဲလန်းပါသည်။ နေ၀င်စ လိမ္မော်ရင့်ရောင်တိမ်တိုက်တွေ အောက်မှာ သူမသည် ဖြာားယောင်းနိုင်စွာ လှပနေသည်။ “မင်းသိလား ကောင်မလေး.. ငါ မင်းဆီမှာ ဘယ်လောက်တောင် ကျဆုံးနေပြီဆိုတာကိုလေ.. ငါ့ရဲ့စိတ်ဝိဥာဉ် တစ်ခုလုံးကို ပြီးပြည့်စုံသွားအောင် မင်းဖန်တီးနေတယ် ဆိုတာကို သိလို့များ သဘောတကျ ရယ်မောနေရတာလား” ကျွန်တော် ကျေနပ်စွာ တွေးနေမိသည်။ သူမနှင့် ... Continue Reading
ရှေးဖြစ်ဟောင်း အောက်မေ့ဖွယ် (၄)
Published By Myat Shu On Thursday, July 28th 2011. Under အမှတ်တရ
ပလေကပ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ အခုခေတ် လူငယ်တို့ “ပလေကပ်” ဆိုတာ သိမှ သိကြပါ့မလားပဲ။ “ပလေကပ်” ဆိုတာ လုံချည်ကွဲ့။ အိန္ဒိယပြည်က လာတဲ့ လုံချည်။ ပါးတယ်။ အနံကြီး ကွင်းကျယ်နဲ့ အတော်ဝတ်လို့ ကောင်းတယ်။ ကိုလိုနီခေတ် တလျှောက်လုံး အတော် လူကြိုက်များကြပြီး ဘဘတို့ သိတတ်တဲ့ အရွယ်၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပျောက်တဲ့နီးပါးလောက် ဖြစ်သွားပြီ။ ရရင်လည်း အတော် ဈေးကြီး ပေးဝယ်ရတယ်။ ကဲ.. ဘဘက ခေါင်းစဉ်မှာ “ပလေကပ်” ဆိုတဲ့ လုံချည်နဲ့ “ဒီမိုကရေစီ” ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး ဝေါဟာရတို့ တွဲသုံးလိုက်တော့ သားတို့၊ သမီးတို့က ဘဘ အသက်ကြီးလို့ ပေါက်သွားပြီလားလို့ ထင်ကြမှာပဲ။ ... Continue Reading
ဒင်နဲ့ မြရဲ့ လောကနိဗ္ဗာန်
Published By Myat Shu On Thursday, July 28th 2011. Under အမှတ်တရ, ခေတ်ဟောင်းတေးများ
httpv://youtu.be/y-SkJ3SZu9M ခုတလော မိုးအေးအေးမှာ နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းတွေက ခင်မောင်ရင်၊ မကြည်အောင်နဲ့ လေဘာတီမြရင်တို့ရဲ့ သီချင်းတွေပါပဲ။ တနေ့ကတင် မောနင်းတင်တင်ရဲ့ သီချင်း အပုဒ် ၂၀ လောက် ရလာခဲ့လို့ ၀မ်းသာရသေး။ တချို့သီချင်းများက နားစွဲနေကျ မဟုတ်လေတော့ အသစ်အဆန်းလို ဖြစ်နေတယ်။ ခေတ်ဟောင်းသီချင်းတွေ ကြိုက်တာတော့ မှန်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တချို့သီချင်းတွေကျတော့လည်း မကြိုက်ပြန်ဘူး။ ဥပမာ - အေ၀မ်းတင်မောင်ရဲ့ “ချစ်တယ်” တို့၊ “လူပျိုပေါက်” တို့ သီချင်းတွေ တယ် နားမတွေ့လှဘူး။ ခေတ်ဟောင်းသီချင်းပါမက ငွေရတု၊ ရွှေရတု ခေတ်က ရုပ်ရှင်ကားတွေဆိုရင်လဲ ကျမအနေနဲ့ မက်မက်စက်စက် ရှိပါတယ်။ စစ်ကြိုခေတ်က ဇာတ်ကားတွေကို ဒီဗီဒီကူးပြီး ပို့ပေးမယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, July 26th 2011. Under ၀တ္ထု
(၁) သားဦး အရူး ဟူသော စကားပုံတွင် အဓိပ္ပါယ် နှစ်ခုရှိသည် ဟု ဆိုကြ၏။ ပထမ အဓိပ္ပါယ်မှာ မိဘတို့သည် သားဦး သမီးဦးကို အရူးအမူး ချစ်တတ်သည်။ သားဦး သမီးဦး ဖွားမြင်ပါက မိဘတို့သည် အရူးအမူး အချစ်ကြီး ချစ်ကြပြီးလျှင် အရူးကြီးများပမာ ဖြစ်ရတော့လေသည် ဟူ၏။ ဒုတိယ အဓိပ္ပါယ်မှာ သားဦး သမီးဦးတို့သည် ရူးပေါပေါ ဖြစ်တတ်သည် ဟူသတတ်။ ဒုတိယ အဓိပ္ပါယ် မှန်ကန်ခြင်း ရှိမရှိကိုမူ သားဦး၊ သမီးဦးဖြစ်သူများသာလျှင် အသိဆုံး ဖြစ်ချိမ့်မည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ် ပြောလိုရင်း အကြောင်းမှာ သားဦး သမီးဦး မွေးဖွားခြင်းနှင့် များစွာ သက်ဆိုင်လှသည် မဟုတ်ချေ။ ... Continue Reading